prompt, serealy ထဲမှာ "Molodezhka" အားလုံး action ကိုတစ်ဦးစင်မြင့်ပေါ်ရာအရပ်ကိုကြာ? အဘယ်အရာကိုမြို့၌ဤနယ်ပယ်တွင်? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
prompt, serealy ထဲမှာ "Molodezhka" အားလုံး action ကိုတစ်ဦးစင်မြင့်ပေါ်ရာအရပ်ကိုကြာ? အဘယ်အရာကိုမြို့၌ဤနယ်ပယ်တွင်?
Togliatti Komsomolskiy ခရိုင်ရန်အလွန်ဆင်တူ Podolsk နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
(Samara ဒေသ) ။
Posted in, ဟော်ကီ
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,229 စက္ကန့်ကျော် Generate ။